Real Madrid oo doonaysa inay la wareego laacibka khadka dhexe ee Manchester United Paul Pogba, laakiin waa haddii… – Gool FM
(Madrid) 01 May 2019. Kooxda kubadda cagta Real Madrid ayaa la soo warinayaa inay si weyn u xiiseynayso inay la wareego ciyaaryahan Paul Pogba, laakiin waxa ay doonayaan inuu laacibkan khadka dhexe hoos u dhigo mushaarka waalida ah ee uu ka qaato kooxda Manchester United.
Naadiga reer Spain ayaa muddo dheer la la xiriirinayey saxiixa Pogba, kaasoo qudhiisu in ka badan hal jeer sheegay inay tahay riyo u ciyaarista kooxda Real Madrid.
Los Blancos ayaa la sheegayaa inay ku kalsoon tahay inay soo qaadanayso ciyaaryahankan inta lagu guda jiro suuqa kala iibsiga xiddigaha ee xagaagan, laakiin Shabakadda ciyaaraha ee ESPN ayaa warinaysa in 26-sano jirkaan laga doonayo inuu dhimo mushaarkiisa si uu ugu biiro Madrid.
Warbixintu waxa ay intaa ku daraysaa in kooxda La Ligaha ka dhisan aysan doonayn in xiddigan reer France ay kula wareego mushaarka waalida ah ee uu iminka ka qaato kooxda Man United todobaadkii, waxaana uu Pogba haatan garoonka Old Traffrod uu isbuucii ka qaataa mushaar dhan 290 kun oo gini.
Madrid waxa ay u muuqataa inay ka digtoonaan doonto mushaarka weyn ee uu laacibkan qaato, waxayna doonayaan in ay iska ilaaliyaan inay galaan xaalad dhaqaale oo dheeraad ah.
Weeraryahanka kooxda Chelsea ee Eden Hazard iyo laacibka khadka dhexe ee kooxda Tottenham Hotspur ee Christian Eriksen ayaa sidoo kale la sheegayaa inay bartilmaameed u yihiin kooxda uu hoggaamiyo tababare Zinedine Zidane.